Zoro Ezo nzuzo akpa uwe mkpịsị ugodi mkpịsị vidiyo vidiyo (SPY009) | Ngwọta OMG
Igwefoto vidiyo nke OMG Pocket Pen Hidden Spy (SPY009)
Obere Video Pen Igwefoto - HD 720P Obere Zoro ezo Igwefoto Nyocha Pen, Igwe Igwefoto na Audio na Voice Recorder, gbakwunyere Oge Nkọwa 5 Oge Maka Ndị uweojii, Ndị Nchọpụta Onwe, na Ọrụ Nchọpụta
Ọfọn Kere Nledo igwefoto Pen: Ọ dị ka pen mgbe ị tinyere ya n'akpa gị, ma ọ dịghị onye ga-ama na ọ bụ igwefoto. Obere obere akpa cam dịka aka gị, n'akpa uwe, ma ọ bụ drawer. Ọ dị ntakịrị iji zoo ebe ọ bụla, yana edepụtara ya kpọmkwem maka ndekọ ndị uweojii ma ọ bụ nchọpụta ebe nchekwa.
Onu Ogugu Ogugu Ozo na Olu: Igwefoto vidio ahụ na-edekọ vidiyo vidiyo 1280 * 720P dị elu. Site na igwe okwu ya, ọ na-arụ ọrụ nke ọma dị ka onye na-edekọ olu. Mgbe ọ na-aga n'ihu, ọ na-echekwa faịlụ vidiyo na mpaghara 5 nkeji, ma stampụ ụbọchị dị na faịlụ ọ bụla dị ka isi okwu mgbe ị na-enyocha faịlụ.
Oge Ogologo Oge Ochie: Na batrị 720mAh a na-agbanye n'ime ya, obere igwefoto nyocha na-akwado ndekọ ruo 5 awa mgbe ụgwọ zuru ezu. Ọ na-akwado ịdekọ ma na-ebugharị n'otu oge ahụ, n'ihi ya ị nwere ike itinye aka ike ma ọ bụ ihe nkwụnye ọkụ ka ị kwụrụ mgbe ịdekọ.
Dị mfe iji: Nanị pịa bọtịnụ ka ịmalite ma kwụsị ndekọ. Nke a bụ nkwụnye kachasị mma na igwu egwu na ahịa. Nanị nkeda nledo elekere na kọmputa gị site na eriri USB, tinyere nyochaa eserese gị. Ọ na-eme ka ọ bụrụ enyi na nwatakịrị nwere ike ịrụ ọrụ ya.
SPY009 - Foto dị na bọtịnụ bọtịnụ Pen Pen Video
Nzuzo 8335 5 Echiche Taa